16 matipi uye madiki ekuvandudza hupenyu hwebhatiri pane iyo giraxy s7 uye s7 kumucheto
Kuru Nhau & Ongororo 16 matipi uye manomano ekuvandudza hupenyu hwebhatiri pane iyo Galaxy S7 uye S7 kumucheto
16 matipi uye manomano ekuvandudza hupenyu hwebhatiri pane iyo Galaxy S7 uye S7 kumucheto
Kana iwe uchifunga nezvazvo, isu & maapos takarovera zvakanyanya chimwe chinhu chesiringi nema smartphones-zvirinani neimwe nzira. Mazhinji emahara Hardware nhasi ave nenguva kubva kuyambuka yakashomeka yakashomeka inodikanwa kune yakasarudzika mushandisi ruzivo, uye yaimbove yakasarudzika tech yave kuwanikwa kuvanhu. Saka isu tine ese eye eye isu atinoda pamwe nekuratidzwa kwema smartphones edu, isu tine yese yekugadzirisa mhasuru inodiwa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, uye isu tine makamera akanaka zvakakwana kuti atore akawanda chero nguva pasina dambudziko rakawandisa. Asi pane & chidimbu chimwe chetekinoroji iyo & maapos anga achisara kumashure kwezvasara, uye kwenguva yakareba sekugona kwedu kurangarira: bhatiri.
Kugadzira simba uye kuichengeta chinhu chakaoma kuita. Iwe unofanirwa kuziva-ingo taura kumwedzi wako wekupedzisira & apos; s magetsi uye gasi mabhiri, uye funga huni hunodiwa kuti uchengetedze nzvimbo yako ine moto. Kunatsiridza kunoitwa, hongu, kunoitwa patinoenda pamwe chete. Mabhatiri ari mumafoni emazuva ano ari nani pane aya mashanu emakore apfuura. Uye mumakore mashanu, ivo & maapos; vangangove vari nani. Izvo zvikamu zvakasiyana mukati me smartphone yako zviri kuwedzerawo simba-rinoshanda. Uye zvakadaro, isu tinoda zvimwe.
Chokwadi, kana paine & apos; s chimwe chinhu chinoratidzika kunge chinogadzikana zvakanyanya kumutemo wekudzora kudzoka kubva pakuona kwevashandisi, maapos anofanira kunge ari bhatiri. Kuwanda kwayo kwatiinako, kuri nani, uye isu tinoda chokwadi. Inotakura zvimwe! Uye kune nzira dzekuita zvirinani kuita kunze kweiyo juicer mukati mefoni muhomwe yako, kunyanya kana iri & apos; s Samsung Galaxy S7 uye S7 kumucheto.
Isu & maapos; takanyora pazasi manhamba uye matipi ekuvandudza hupenyu hwebhatiri pane Samsung & apos; yazvino, uye iwo anotangira pane zviri pachena nzira yese kune yakaoma uye inopedza nguva. Hapana munhu anotarisira kuti iwe uende kune vese. Panzvimbo iyoyo, edza uye gadzirisa izvi kune zvaunoda uye zvaunofarira kuitira kuti uwane zvakanakisa kubva mubhatiri rako pasina kupa zvibayiro mashandiro aunoitira hanya nawo. Mushure mezvose, kana iwe ukaguma uine zvirinani bhatiri hupenyu, asi chete nekukanganisa kwezvakakosha maficha, saka chii & apos; s iyo poindi?
Matipi uye madiki ekuvandudza hupenyu hwebhatiri pane iyo Galaxy S7 uye S7 kumucheto
inoita oneplus 5t inoshanda paverizon
Sei, riini, uye sei kutora HDR mifananidzo neako smartphone
Kuedzwa muDevOps Nyika
Motorola inotangazve kuburitswa muApple 7.0 Nougat yeMoto X Yakachena Edition muUS
Maitiro ekuvandudza yako eEuropean Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) kune yazvino Android 5.0 Lollipop firmware
Maitiro ekuvharidzira manhamba efoni muIOS, Android, uye Windows Runhare
Motorola inotanga kuburitsa Moto G5 uye G5 Plus Android 8.0 Oreo kugadzirisa
Fitbit Nhema Chishanu madhiri abuda: chengetedza hombe paFitbit Charge HR, Charge, Flex uye Imwe